China self-suction filter mask ary mpamatsy | Zhongxing
Ny saron-tava miaro tena manokana dia manana ny fiasan'ny sombin-tsolika tsy misy menaka toy ny vovoka, setroka, zavona ary zavamiaina bitika; omena amin'ny endrika tsy misy steril. Ny fanoherana ny airflow dia ambany noho ny 110Pa, ny fahombiazan'ny filtration an'ny sombin-tsolika tsy mihoatra ny 95%, ary ny fahombiazan'ny bakteria dia mihoatra ny 95%.
Ity vokatra ity dia mety amin'ny fiarovana ny filtration filtration sombin-javatra tsy misy menaka toy ny vovoka, zavona asidra, zavon-doko, zavamiaina bitika sns.
Saron-tava fandidiana fitsaboana fonosana 50
Ny mason-tsivana fiarovan-tenan'ny tena dia manana ireto toetra manaraka ireto:
1. Ny sosona ivelany amin'ny saron-tava dia vita amin'ny akora polypropylene tsy misy poizina, izay lamba tsy manenon-drano amin'ny laoniny;
2. Ny sosona anatiny amin'ny sarontava dia vita amin'ny akora polypropylene tsy misy poizina, ES landihazo rivotra mafana ary lamba tsy misy tenona viscose miaraka amin'ny hafanana akaiky azo idirana;
3. Ny singa sivana amin'ny sarontava dia mitafy lamba roa tsy voatenona notontaina tsy voatenona notsaboina izay notsaboina tamin'ny alàlan'ny elektrostika, ary ny fahombiazan'ny filtration ny bakteria dia mahatratra 95%;
4. Ny clip orona plastika ao amin'ny vatan'ny sarontava dia azo ahitsy amin'ny sitrapo mandritra ny fizotran'akanjo, ary mety kokoa sy ahazoana aina kokoa ny anaovana azy;
5. Ny endrika telo-mason'ilay sarontava, ny fanoherana ny fifohana rivotra mandritra ny fitafiana dia latsaky ny 110Pa, tsy mamono;
6. Ity vokatra ity dia mampiasa teknolojia fanamafisam-peo tsy mitongilana sy teknolojia fanamafisam-peo ultrasonic mba hahatonga ny sarontava ho malemy, matanjaka ary tsara tarehy.
Ny saron-tava fiarovan-tenan'ny tena dia ampiasaina indrindra hiarovana ny olona amin'ny tontolo iainana izay maloto ny rivotra noho ny poti-tsy misy menaka toy ny vovoka, setroka, zavona ary zavamiaina bitika. Ny fomba fampiasana lehibe indrindra dia:
Ahoana ny fampiasana saron-tava andian-tsarimihetsika N95xx:
1. Sokafy ny fonosana ary esory ny saron-tava, rakotra orona mankany ivelany, sintomy ny tadin-tsofina iray amin'ny tànana roa, alao antoka fa miakatra ny tadin'ny orona, araka ny hita eo amin'ny sary 1 etsy ambany;
2. Apetaho sarontava, apetraho ao anaty saron-tava ny saokanao, ary aforeto amin'ny tadin-tànana roa ny tadin-tsofina, araka ny hita eo amin'ny sary 2 etsy ambany;
3. Ampifanaraho amin'ny toerana mety ahazoana misaron-tava ny tarehy, araka ny hita eo amin'ny sary 3 etsy ambany
4. Tsindrio ny fanondro sy rantsantanana afovoan'ny tanan'ny roa mba hanamboarana ny tadin'ny orona mandra-pahatongan'ny akaiky ny tetezan'ny orona, araka ny hita eo amin'ny sary 4 etsy ambany
5.Isaky ny manao sarontava sy miditra amin'ny sehatry ny asa ianao dia tokony hanao fanaraha-maso henjana. Ny fomba fanamarinana dia ny manarona ny sarontava miaro amin'ny tananao ary manainga haingana, araka ny hita eo amin'ny sary 5 etsy ambany. Raha misy fivoahan'ny rivotra eo akaikin'ny tadin'ny orona dia araho ny dingana 4) Ampifanaraho mandra-pahatongan'ny famoahana rivotra izany.
Fampiasana maska ​​N9501 andiana saron-doha:
1. Sokafy ny fonosana ary esory ny sarontava, tazomy ny sisin'ilay sarontava misy clip orona, ataovy ambony ny tadim-borona, ary hihantona voajanahary ny fehiloha, araka ny hita eo amin'ny sary 1 etsy ambany;
2. Ataovy ny saron-tava, apetraho ao anaty saron-tava ny saokany ka manakaiky ny tarehy izany, ampiasao ny tanana iray hamakivakiana ny fehin-doha roa, ary avy eo dia ampiasao ilay tanana iray hafa hisintona ny fehiloha ambany mankany ambadiky ny loha ary apetaho amin'ny vozony, Araka ny hita eo amin'ny sary 2 etsy ambany;
3. Hisintona ny fehiloha ambony mankany an-damosin'ny loha ary apetaho eo an-tampon'ny sofina ao an-damosin'ny lohan'ny loha, araka ny hita eo amin'ny sary 3 etsy ambany;
4. Tsindrio ny fanondro sy rantsantanana afovoan'ny tanan'ny roa mba hanamboarana ny tadin'ny orona mandra-pahatongan'ny akaikin'ny tetezan'ny orona, araka ny hita eo amin'ny sary 4 etsy ambany;
5.Isaky ny manao sarontava sy miditra amin'ny sehatry ny asa ianao dia tokony hanao fanaraha-maso henjana. Ny fomba fanamarinana dia ny manarona ny sarontava miaro amin'ny tananao ary manainga haingana, araka ny hita eo amin'ny sary 5 etsy ambony. Raha misy fivoahan'ny rivotra eo akaikin'ny tadin'ny orona dia araho ny dingana 4) Amboary indray ny tadin'ny orona. Raha misy manodidina ny fiparitahan'ny rivotra dia amboary ny fehiloha ary avereno ny dingana 1) ka hatramin'ny 4) mandra-pivoakany.
Anaran'ny vokatra Sarontava miaro tena sivana
Modely N9501 Earband Type / N9501 Headband Type
Famaritana 180mm×120mm / 160mm×105mm / 140mm×95mm
Fitaovana polypropylene lamba tsy tenona, ES landihazo rivotra mafana
Taham-panivanan'ny bakteria ≥95 isan-jato
Taham-panasiana sombin-tsolika tsy misy menaka ≥95%
Mifanaraka amin'ny isa mahazatra GB 2626-2019
Famaritana fonosana fonosana plastika taratasy-plastika, tapa-1 isaky ny kitapo
Function Sakano ireo sombin-tsolika tsy misy menaka toy ny vovoka, setroka, zavona ary zavamiaina bitika
Teo aloha: Sarontava fitsaboana tsy voatenona fanary
Manaraka: 84 famonoana otrikaretina
Saron-tava medikaly fanary azo ampiasaina, Saron-tava Antiviral, Swab vita amin'ny landihazo voadio, Saron-tava miaina, Landihazo fitsaboana, Pad mpitsabo mpanampy,